Laacib ka tirsan Arsenal oo aaminsan in Chelsea ay qaadeyso Premier League kal ciyaareedkan – Gool FM
(London) 28 Dis 2016. Chelsea ayaa guul gaartay kulankeedii 12-aad oo xiriir ah kaddib markii ay ka adkaatay naadiga Bournemouth kulankii Boxing Day ga taa oo rikoodh ka noqotay kooxda.
Jack Wilshere ee ka tirsan Arsenal balse amaahda ku jooga Bournemouth ayaa halis isku galiyay inuu muteysto carada taageerayaasha Gunners maadaama uu qabo in Chelsea ay hanan karto Premier League kal ciyaareedkan.
“Waxay u muuqdaan inay yihiin horyaalka waqtigan, aniga ahaan waqti xaadirkan waa kooxda ugu fiican horyaalka,” Wilshere ayaa sidaa yiri.
“Weli wado dheer ayaa harsan dabcan , ma dhihi kartid shaki la’aan way ku guuleysanayaan horyaalka, laakiin waqtigan waxay u muuqdaan kuwa ugu xoogan tartanka.
“Waxay heleen shaxdan cusub oo u shaqeysay iyaga, sikastaba, waxaan markasta aaminsanaa inay goob ay adag tahay in la yimaado.
“Marar yar ayaan Arsenal la imid Stamford Bridge hal jeer oo qura ayaana ku adkaanay, laakiin sidaas way ka sii arxan daran yihiin, way garanayaan waxa ay tahay shaqada ay gacanta ku hayaan, halkaa ayay aadayaan usbuuc usbuuc ayayna u badelayaan qorshahooda kulanka iyadoo ay ku xiran tahay hadba kooxda ay la ciyaarayaan.
“Waxaan aaminsanahay inay taasi tahay calaamadda koox sare.”.
Dhibaato soo wajahday heshiiskii Jese Rodriguez uu ugu biiri lahaa Las Palmas